खाली पेटमा यस्ता खानेकुराले स्वास्थ्यमा जटिल समस्या ! - खाली पेटमा यस्ता खानेकुराले स्वास्थ्यमा जटिल समस्या !
खाली पेटमा यस्ता खानेकुराले स्वास्थ्यमा जटिल समस्या !
२०७५, २९ चैत्र, 09:49:56 AM
एजेन्सी । कहिलेकाहीँ खानेकुरामा ध्यान नदिँदा स्वास्थ्यमा ठुलै समस्या निम्तिन सक्छ । मानिसमा धेरैजसो रोगहरु जीवनशैलीको आधारमा लाग्ने गर्छन् । अझ त्यसमध्ये पनि धेरै रोगहरु हाम्रो खानपिनको बानीमा भएको लापरबाहीले लाग्ने गर्छन् ।
बिहान उठ्ने बित्तिकै खाली पेटमा कफि पिउँदा स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पर्छ। पेट पोल्ने र ग्यास भरिनेजस्ता समस्याले दिनभरी सताउन सक्छ। बिहान खाली पेटमा कफि पिउने धेरै व्यक्तिको नियमित बानी हुनसक्छ। एकपटक कफि पिउने बानी लाग्यो भने छोड्न निकै गाह्रो पर्छ। एसिडिटी, ग्यास्ट्रिक, छातीमा जलन हुने र पाचनशक्ति कमजोर हुने जस्ता समस्याले बिकराल रुप लिन समय लाग्दैन्।
केरामा म्याग्नेसियम र पोटासियम अधिक मात्रामा पाइन्छ। ब्याक्टेरिया सक्रिय भइ स्वत असर मुटुमा पर्छ। खाली पेटमा तीनवटा केरा खाएमा दिनभरी मुटु दुख्ने समस्याले सताउन सक्छ।
तपाईलाई मधुमेह भएको छ ? थाहा पाउनुस कस्तो खाने कुरा खानु उपयुक्त हुन्छ !